Vatsigiri veZanu PF neMDC Voratidzira Kusafara neMafambiro eSarudzo muMapato Avo
Chikumi 21, 2013
HARARE — Nhengo dzeMDC inotungamirwa naVaMorgan Tsvangirai dzaratidzira pamuzinda webato radzo dzichiti hadzisi kufara nemafambisirwo akaitwa sarudzo dzekutsvaga achamirira bato iri musarudzo dzeparamende.
Nekune rumwe rutivi, nhengo dze Zanu PF dzaratidzirawo pamuzinda webato radzo muHarare dzichinyunyuta nekudzokorerwa kupihwa vanhu vachadzimirira musarudzo idzi munzvimbo dzakawanda munyika.
Vatsgiri veMDC-T vanobva mumusha we Epworth muHarare vanosvika zana vawungana pamuzinda webato iri pa Harvest House vachiti havasi kufara nemafambisirwo akaitwa sarudzo dzakaitwa svondo rapera dzekutsvaga achavamirira musarudzo dzeparemende.
Nhengo idzi dzinoti hadzichada mumiriri wadzo muparamende, Va Eliah Jembere.
Kunyange hazvo sarudzo dzekutsvaga achamirira MDC-T munzvimbo iyi dzakaitwa svondo rapfuura, vatsigiri vebato iri vakaita saAmai Rudhia Phiri vanove sachigaro wemadzimai mu MDC-T kuEpworth, vanoti sarudzo dzakaitwa idzi hadzina kufambiswa zvakanaka.
Izvi zvatsinhirwa naVaBenjamin Mhenzi vanove mutevedzeri wemurongi wemisangano mu Ward 1 ku Epworth kwakare.
Amai Phiri vanoti vari kuda kuti sarudzo itsva dziitwe sezvo vasina kuwudzwa zvakabuda musarudzo dzekutanga sezvo mapepa ekuvhoteswa achinzi akatizwa nawo musi uyu pakaita mhirizhonga mavhoti asati averengwa.
Murongi wemisangano muMDC-T, VaNelson Chamisa, varamba kutaura ne Studio7 pavabuda pamuzinda webato ravo vakawunganirwa nevanovachengetedza.
Mushure mekuramba kutaura neStudio7, VaChamisa vabva vazvivharira mumotokari yavo ndokubva vati hutu nhengo dzebato ravo dzikasara dzakashama muromo sezvo dzanga dzakamirira kuwona VaChamisa.
Zvichakadai, mutauriri weMDC-T, Va Douglas Mwonzora, vanoti Va Jembere ndivo vachamirira bato ravo ku Epworth kunyange hazvo vatsigiri vavo vachiti panofanirwa kuitwa sarudzo itsva. Va Jembere vanga vachikwikwidzwa nevanhu vanomwe.
Zvichakadai, vatsigiri ve Zanu PF vanobva kunzvimbo dzakasiyana-siyana munyika varatidzirawo pamuzinda webato ravo vachiti havasi kufara nekupihwa vachavamirira musarudzo kwavanoti kwakaitwa nebato ravo munzvimbo dzakawanda munyika.
Bato iri rakaburitsa mazita evanhu vasiri kukwikwidzwa musarudzo dzemubato pamwe nevachakwikwidzwa. Asi vatsigiri vebato iri vanoti pane kubiridzira kwakaitika pakudomwa kwemazita aya vachakwikwidza nemusi weChitatu svondo rinouya.
Kuratidzira kwaitwa nenhengo dze Zanu PF kwambokonzera kumbovharirwa kwevatori venhau vashanu pamuzinda webato iri nevanochengeteza nzvimbo kwe awa imwe chete kusvika vazonunurwa nemurongi wemisangano mubato iri, uye vari gurukota rinowona nezvekuburitswa kwemashoko, Va Webster Shamu.
Munyori anowona nezvekufambiswa kwemabasa muiZanu PF, Va Didymus Mutasa, vanoti havasi kunyatsoziva zviri kuitika mubato ravo sezvo vange vasiri muHarare.
Dzimwe nzvimbo dzine vanhu vasiri kufara mu Zanu PF dzinosanganisira Zvimba North uko kunonzi kuchakwikwidzwa naVa Ignatius Chombo, Kadoma nedzimwe nzvimbo.
Dzimwe nyanzvi munyaya dzezvematongerwo enyika dzinoti rwendo rwuno zvinhu hazvina kumira zvakanaka mubato ratonga nyika kwemakore makumi matatu nematatu kubva nyika yawana kuzvitonga muna 1980, kunyange hazvo vakuru vebato iri vari kuramba vakaomesa musoro pazuva richaitwa sarudzo.